စံလင်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စံလင်း
Category Archives: စံလင်း
စံလင်း *i* မြစ်တို့စီးဆင်းရာ
February 8, 2013 လူသား စံလင်း
၀၁။ ကြယ်လမင်းချစ်သူကျွန်တော် (စံလင်း) ၀၂။ သက်ထား (စံလင်း) ၀၃။ စာရိတ္တမကောင်းတဲ့လမင်း (စံလင်း) ၀၄။ ပြန်ညှိရမယ့်ကြိုး (စံလင်း) ၀၅။ အိမ်အပြန်လမ်း (စံလင်း) ၀၆။ ကြားလေပြေ (စံလင်း) ၀၇။ တစ်နေ့ (စံလင်း) ၀၈။ ခွဲခွါချိန် (ခင်မောင်တိုး) ၀၉။ ခွါညို (ခင်မောင်တိုး) ၁၀။ အချစ်ကူလို့ဖြေပါဦး (ခင်မောင်တိုး) ၁၁။ သဲမမဲနဲ့ဦး (ခင်မောင်တိုး) ၁၂။ ဟိုစဉ်ကအရိပ် (ခင်မောင်တိုး) ၁၃။ မင်းမပါတဲ့ခရီး (ခင်မောင်တိုး) သီချင်းအမည်လေးများကူညီဖေါ်ပြပေးတဲ့ rustic.mmcp အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။
January 1, 2011 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) စံလင်း ခင်မောင်တိုး5Comments
စံလင်း+မီမီဝင်းဖေ – ချစ်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်
၁။ ကဗျာမမီ(က) ၂။ ၀င်ခွင့်ပြုပါ ၃။ ကိန္နရီကိန္နရာစကား ၄။ ချစ်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက် ၅။ ချစ်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက် ၆။ စံသားမှု ၇။ ငြိမ်းလှဲ့ ပါမိုး ၈။ ကဗျာမမီ(ခ) ၉။ နွေရောက်ခဲ့ပြီ ၁၀။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ ၁၁။ စိန်ပန်းပွင့်ကြွေ ၁၂။ ပျက်စီးသွားသောနှလုံးသား ၁၃။ နေရဲ့နေ့ညရဲ့လ ၁၄။ ကဗျာမမီ(က)
October 22, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စံလင်း မီမီဝင်းဖေ Myanmar Artist
စံလင်း – မြှားတစ်စင်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
၁။ နွေနှင့်အတူ ၂။ နေရဲ့နေ့ လရဲ့ည ၃။ မြစ်တို့စီးဆင်းရာ ၄။ ကဗျာ ၅။ တစ်မိုးရိပ်အောက် ၆။ တစ်ခွန်းစကား ၇။ စိန်ပန်းပွင့်ကြွေ ၈။ ကဗျာ မမီ စာမပီ ၉။ အတွေး မဲ့ အတွေး ၁၀။ ပြောင်းပြန်စီးသောမြစ် ၁၁။ စိမ်းရင့်ရင့်စိမ်း ၁၂။ ပန်းသွားကောက်မယ်
October 22, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) စံလင်း Myanmar Artist
စံလင်း – တစ်ခွန်းစကား
၀၁။ တစ်ခွန်းစကား ၀၂။ သက်ထား ၀၃။ ကြိုးမဲ့ချည်တိုင်…. (reprise of Khin Maung Toe’s song) ၀၄။ အင်းရာဆည်းဆာ ၀၅။ ပန်းသွားကောက်မယ် ၀၆။ ဘဝရဲ့…. ၀၇။ လွမ်းတယ်…(reprise of Khin One’s song) ၀၈။ စိမ်းပန်းပွင့်ကြွေ ၀၉။ ကြယ်လမင်းကျွန်တော်ချစ်သူ ၁၀။ ရွှေကဗျာ ၁၁။ တစ်သက် တစ်ကြိမ် တစ်ယောက် သီချင်းနာမည်တင်ဆက်ပေးသူ… tayluulin
August 22, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) စံလင်း 10 Comments